I-Classicbot Classic, isipho sentsusa sabathandi beMac | Ndisuka mac
I-Classicbot Classic, isipho sentsusa sabathandi beMac
Ukuba ufuna ukwenza isipho santlandlolo kumlandeli weMac, Classicbot Sisipho esigqibeleleyo. Imalunga ne- umlinganiswa omncinci wokudlala irobhothi olingisa iMac ukusuka kwiminyaka ye-90. Iirobhothi ayinanto: imilenze, iingalo kunye namehlo kwisikrini, inezandla ezisikhumbuza izandla zonqakrazo oludala. Irobhothi inobude obuqikelelweyo ngeesentimitha ezili-10 kwaye ilungile ukuyibeka kwidesktop yokuhombisa. Yenziwe ngeplastikhi esemgangathweni.
Umntu onothando, owenziwe eHong Kong, utshintshe igama lakhe ukusukela oko laqalwa. Ekuqaleni, yayibizwa ngokuba yiMacinbot, kodwa abavelisi bagqiba kwelokuba balitshintshe igama ukunqanda iingxaki zomthetho ngeApple. Njengawo nawuphi na umntu ozihloniphayo, uthwala izinto zayo. Kule meko ine- ibhegi yomsebenzi kunye nempuku. Ngaphezu koko, iingalo kunye nemilenze ingasuswa. Ngelo xesha, kujongeka ngathi yincinci yeeMacs zokuqala ukubetha emarikeni.
Kwibhokisi esiyifumanayo izitikha ezimbini enegama lemveliso kunye nelogo yayo. Umzobo utsalela ingqalelo kwidesika, etsala uncumo olungaphezulu kwesinye. Umenzi ulungiselela ezinye izinto ezincinane zesitayile esifanayo, ezinje ngomgqomo wokurisayikilisha okanye iBot G3 esiya kuyibona kwiinyanga ezizayo. Ndikuxelele lonto Inkampani ilungiselela iintlelo ezimbini ezinqunyelwe ndibize uTron kwaye Molo. Umahluko ngokwentsusa lutshintsho kwiscreen, ukuxelisa iinguqulelo zokuqala ze-macOS, kunye nenye emnyama, eyahlukileyo kwezinye iinguqulelo ezimhlophe.
Okwangoku, fumana Le robhothi intle inokwenzeka kuphela kwiwebhusayithi yomenzi, ngexabiso le- $ 35,80, kubandakanya iindleko eziqikelelweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Classicbot Classic, isipho sentsusa sabathandi beMac
UMicrosoft uthi iNcwadi yayo yokuGqwesa yesi-2 iphindwe kabini amandla eziMveliso zeMacBook zangoku